How can you know your child has mental problem - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
သငျ့ကလေး ဘယျအခြိနျမှာ စိတျကနျြးမာရေး ပွသနာရှိနပွေီလဲလို့ သိမလဲ ?
လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြမြားအရ ကမ်ဘာပျေါရှိ ကလေးသူငယျအမြားစုဟာ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ဝဒေနာမြား ၊ ပွသနာမြားကို ခံစားရငျဆငျ နရေပါတယျ ။
Mayo Clinic က စိတျကနျြးမာရေးဆရာဝနျတဈဦးဖွဈတဲ့ ပီတာဂနျြဆနျ ဦးဆောငျတဲ့ အဖှဲ့ဟာ မိသားစုပေါငျး ၆၀၀၀ ကြျောကို အငျတာဗြူးခဲ့ပွီး မိမိကလေးဟာ စိတျရောဂါ စိတျဝဒေနာ ခံစားနရေခွငျး ရှိမရှိ အကွမျးဖငျြး သိရှိနိုငျတဲ့ အခကျြတှကေို ထုပျပေးခဲ့ပါတယျ ။ ဒါက မိဘတှေ ဆရာတှေ နဲ့တခွားကလေးသူငယျပွုစုစောငျ့ရှောကျရေး ကြှမျးကငျြသူတှအေတှကျ ကလေးငယျမြားကို စောငျ့ရှောကျရာမှာ အထောကျအကူ ဖွဈစပေါတယျ ။
အဓိကရညျရှယျခကျြမှာ စိတျအလိုမကခြွငျးစိတျတို စိတျဆတျခွငျး ဆူပူစိတျကောကျခွငျး ကဲ့သို့ သာမာနျစိတျအခွအေနနှေငျ့ ရောထှေးပွီး မသိရှိလိုကျရခွငျးမြိုး မဖွဈစရေနျ ရညျရှယျပါတယျ ။
ဒီလို စိတျကနျြးမာရေး စိတျဝဒေနာ ခံစားနရေမှနျး သိစနေိုငျတဲ့အခကျြမြားဟာလဲ ဘယျလောကျကွာကွာထိ ကလေးငယျဟာ ခံစားနခေဲ့ရသလဲ ၊ သူ့ဘဝအပျါဘယျလောကျ အထိလှမျးမိုးနလေဲ သကျရောကျနစေလေဲဆိုတဲ့အခကျြတှဟောလဲ ကှဲပွားစပေါတယျ ။
ဒီအောကျပါ အခွငျးအရာမြား သငျ့ကလေးတှငျ တှရှေိ့ပါက ဂရုပွုရနျ လိုအပျပါတယျ ။
* နှဈပတျထကျပိုပွီး မိမိကလေးတှငျ အလှနျအမငျး ဝမျးနညျးနပေုံရခွငျး ရှောငျဖယျဖယျနေ နခွေငျး
* မိမိကိုယျကို အနာတရဖွဈစရေနျ သို့မဟုတျ သတျသရေနျ အားထုတျခွငျး စီစဉျနခွေငျး
* ရုတျတရကျ ခကျြခွငျး အကွောကျလှနျ လကျဖြားခွဖြေားမြား အေးစကျလာခွငျး အသကျရှူမွနျ နှလုံးခုနျမွနျလာခွငျ
* မကွာခဏ ရနျဖွဈခွငျး ရနျဖွဈရာတှငျ တုတျ ၊ ဓားကဲ့သို့ အန်တရာယျရှိသညျ့ အရာမြားဖွငျ့ နာကငျြစခွေငျး
* ပွငျးထနျပွီး ထိနျးသိမျးရခကျသော အပွုအမူမြားဖွငျ့ မိမိကိုယျကို သို့မဟုတျ သူတဈပါးကို ထိခိုကျစခွေငျး
* ပိနျစရေနျ မစားမသောကျခွငျး အော့အနျထုတျပဈခွငျး ဝမျးနှုတျဆေး အပွငျးစားမြားစားခွငျး
* နစေ့ဉျလုပျငနျးဆောငျတာမြား ကိစ်စမြားကို မပွုမူမဆောငျရှကျနိုငျသညျ အထိ အလှနျအကြူး စိတျပူပနျ သောကရောကျနခွေငျး ကွောကျရှံ့ပူပနျနခွေငျး
* ထိခိုကျအနာတရမြား မတျောတဆမှုမြား ဖွဈစသေညျအထိ ပတျဝနျးကငျြ အာရုံစူးစိုကျမှု အားနညျးခွငျး
* မူးယဈဆေးမြား အရကျသစောမြား စှဲလမျးနခွေငျး
* အပွုအမူနှငျ့စိတျပိုငျးဆိုငျရာ သိသိသာသာပွောငျးလဲခွငျး
အထကျပါအခကျြမြားတှရှေိ့ပါက စိတျကနျြးမာရေးဆရာဝနျ စိတျကနျြးမာရေးဆိုငျရာ ကြှမျးကငျြသူမြားနှငျ့ တိုငျပငျဆှေးနှေး ကုသရနျ လိုအပျပါတယျ ။
သင့်ကလေး ဘယ်အချိန်မှာ စိတ်ကျန်းမာရေး ပြသနာရှိနေပြီလဲလို့ သိမလဲ ?
လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကလေးသူငယ်အများစုဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဝေဒနာများ ၊ ပြသနာများကို ခံစားရင်ဆင် နေရပါတယ် ။
Mayo Clinic က စိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ပီတာဂျန်ဆန် ဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့ဟာ မိသားစုပေါင်း ၆၀၀၀ ကျော်ကို အင်တာဗျူးခဲ့ပြီး မိမိကလေးဟာ စိတ်ရောဂါ စိတ်ဝေဒနာ ခံစားနေရခြင်း ရှိမရှိ အကြမ်းဖျင်း သိရှိနိုင်တဲ့ အချက်တွေကို ထုပ်ပေးခဲ့ပါတယ် ။ ဒါက မိဘတွေ ဆရာတွေ နဲ့တခြားကလေးသူငယ်ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး ကျွမ်းကျင်သူတွေအတွက် ကလေးငယ်များကို စောင့်ရှောက်ရာမှာ အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါတယ် ။
အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ စိတ်အလိုမကျခြင်းစိတ်တို စိတ်ဆတ်ခြင်း ဆူပူစိတ်ကောက်ခြင်း ကဲ့သို့ သာမာန်စိတ်အခြေအနေနှင့် ရောထွေးပြီး မသိရှိလိုက်ရခြင်းမျိုး မဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ပါတယ် ။
ဒီလို စိတ်ကျန်းမာရေး စိတ်ဝေဒနာ ခံစားနေရမှန်း သိစေနိုင်တဲ့အချက်များဟာလဲ ဘယ်လောက်ကြာကြာထိ ကလေးငယ်ဟာ ခံစားနေခဲ့ရသလဲ ၊ သူ့ဘဝအပ်ါဘယ်လောက် အထိလွှမ်းမိုးနေလဲ သက်ရောက်နေစေလဲဆိုတဲ့အချက်တွေဟာလဲ ကွဲပြားစေပါတယ် ။
ဒီအောက်ပါ အခြင်းအရာများ သင့်ကလေးတွင် တွေ့ရှိပါက ဂရုပြုရန် လိုအပ်ပါတယ် ။
* နှစ်ပတ်ထက်ပိုပြီး မိမိကလေးတွင် အလွန်အမင်း ဝမ်းနည်းနေပုံရခြင်း ရှောင်ဖယ်ဖယ်နေ နေခြင်း
* မိမိကိုယ်ကို အနာတရဖြစ်စေရန် သို့မဟုတ် သတ်သေရန် အားထုတ်ခြင်း စီစဉ်နေခြင်း
* ရုတ်တရက် ချက်ခြင်း အကြောက်လွန် လက်ဖျားခြေဖျားများ အေးစက်လာခြင်း အသက်ရှူမြန် နှလုံးခုန်မြန်လာခြင်
* မကြာခဏ ရန်ဖြစ်ခြင်း ရန်ဖြစ်ရာတွင် တုတ် ၊ ဓားကဲ့သို့ အန္တရာယ်ရှိသည့် အရာများဖြင့် နာကျင်စေခြင်း
* ပြင်းထန်ပြီး ထိန်းသိမ်းရခက်သော အပြုအမူများဖြင့် မိမိကိုယ်ကို သို့မဟုတ် သူတစ်ပါးကို ထိခိုက်စေခြင်း
* ပိန်စေရန် မစားမသောက်ခြင်း အော့အန်ထုတ်ပစ်ခြင်း ဝမ်းနှုတ်ဆေး အပြင်းစားများစားခြင်း
* နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ကိစ္စများကို မပြုမူမဆောင်ရွက်နိုင်သည် အထိ အလွန်အကျူး စိတ်ပူပန် သောကရောက်နေခြင်း ကြောက်ရွံ့ပူပန်နေခြင်း
* ထိခိုက်အနာတရများ မတော်တဆမှုများ ဖြစ်စေသည်အထိ ပတ်ဝန်းကျင် အာရုံစူးစိုက်မှု အားနည်းခြင်း
* မူးယစ်ဆေးများ အရက်သေစာများ စွဲလမ်းနေခြင်း
* အပြုအမူနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သိသိသာသာပြောင်းလဲခြင်း
အထက်ပါအချက်များတွေ့ရှိပါက စိတ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန် စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေး ကုသရန် လိုအပ်ပါတယ် ။
Causes & complications of gastritis